Maxay ka dhigan tahay in Lionel Messi uu caawa wajahayo Kooxda Napoli? – Gool FM
(Napoli) 25 Feb 2020. Lionel Messi ayaa Kooxdii 40-aad tartanka Champions League caawa ku wajahaya naadiga uu hoggaamiyo Gennaro Gattuso ee Napoli.
Tan iyo markii uu Messi saftay kulankiisii ugu horreeyey tartankan waxa uu wajahay 39 kooxood oo kala duwan isla markaana ka soo kala jeeda 16 waddan, waxaana uu kooxahaas la dheelay 140 kulan, isagoo ka gaartay 83 guul, isla markaana ka dhaliyey 114 gool.
Napoli waa kooxdii lixaad oo Talyaani ah oo uu Messi wajahayo kaddib Udinese (1 kulan iyo 0 gool), Inter (4 kulan iyo gool), Milan (8 kulan iyo 8 gool), Juventus (5 kulan iyo 2 gool) & Roma (4 kulan iyo 2 gool).
Wadar ahaan waxa uu Messi la ciyaaray 22 kulan kooxaha Talyaaniga ka soo jeeda, waxaana uu ka dhaliyey 12 gool, waxaana uu adkaatay kala bar kulamadaas oo ah 11 kulan, isagoo kala kulmay afar guuldarro.
Waxa Leo inta ugu badan wajahay Kooxaha Ingiriiska, xiddigan reer Argentine ayaana wadar ahaan kooxaha ka socda Premier League wajahay 34 kulan, waxaana ay kala yihiin; Chelsea (10 kulan), Manchester United (6 kulan), Arsenal (6 kulan), Manchester City (6 kulan), Liverpool (4 kulan) iyo Tottenham (2 kulan).